China Men's Polar dehwe rokwe bhachi rine liner yechando fekitori uye vagadziri | Dufiest
YeVarume Polar dehwe track bhachi rine liner nguva yechando
Iyo track track yechando bhachi inodziya kwazvo uye yakagadzikana kune ese ari maviri imba uye kufamba uye inotengeswa nesu patenga resesaja. Isu tinoshandisa jira rakasiyana senge donje, acylic, polyester uye Iyi vakadzi hoodie inowanikwa pamutengo wekutengesa. Vatengi vanogona kutenga hoodie yegorosa muhuwandu hwakawanda AT yemakwikwi mutengo AS AS DUFIEST mitambo inogadzira yakasarudzika kubva kuChina, wholesaler, ekisipota uye fekitori yemitambo, hoodies, track majaketi uye pasi, T-shati, Tangi yepamusoro uye akakwana mapfupi kupfeka.
Iyo inoshanda ficha yejaketi ndeyekusimbisa kweiyo Hooded Coat, iyo inowanzo gadzirwa nezvinhu zvisina mvura. Izvi zvinoenderana nechinangwa chekutanga chemugadziri. Paunenge uchigadzira ngowani, iyi mhando yejasi inonyanya kunetseka nekudziya kwese kana uchipfeka kunze. Kuti uite mupfeki ave nezvirinani zviri nani zvekudziya, zviri nani kusarudza mbatya dzepedyo dzekupfeka kana uchienderana. Iko kusanganiswa kweHooded Coat kunogona kujekesa huwandu hwekuchengetedza kupisa basa, iro rinoenderanawo nezvinhu zvisina mvura. Kana iwe ukaterera kune ino ficha, iwe unogona kuve nekutaura kuri nani mukupfeka, inova zvakare hunhu hwerudzi urwu rwejasi.
Yepfuura: Rakajeka dambanemazwi track track bhachi revarume
Zvadaro: Pasi penzira yevarume